Kubaluleke kangakanani ukuba uBawo oYisekwayo baseMerika baqwalasele ingcamango "yenqubo efanelekileyo yomthetho?" Kubalulekile ngokwaneleyo ukuba bayenze kuphela okuqinisekileyo okuqinisekisiwe kabini nguMgaqo-siseko wase-US.
Inkqubo yomgaqo karhulumente kwintlawulo yomgaqo-siseko ukuba izenzo zorhulumente aziyi kuba nefuthe kubemi bayo ngendlela ehlukumezayo. Njengokuba kusetyenziswa namhlanje, inkqubo efanelekileyo ifuna ukuba zonke inkundla zimele zisebenze phantsi kweendlela ezichazwe ngokucacileyo ezikhuselekile ukwenzela ukukhusela inkululeko yabantu.
Inkqubo yoMthetho eMelika
UMgaqo-siseko wesiLungiso wesiGaba uLawula ngokucacileyo ukuba akukho mntu "onokuthintela ubomi, inkululeko okanye ipropathi ngaphandle kwemigaqo yomthetho" nayiphi na isenzo sikarhulumente. Emva koko, iSilungiso seshumi elinesine, samkelwe ngo-1868, sinyathelo ukuya kusetyenziswa ibinzana elifanayo, elibizwa ngokuba yiNkqubo yokuCwangcisa iNkqubo, ukunyusa imfuneko efanayo kubarhulumente belizwe.
Ngokwenza inkqubo efanelekileyo yomthetho isiseko somgaqo-siseko, oomama base-Melika baseMelika bavakalisa ibinzana eliphambili kwi-English Magna Carta ye-1215, ukubonelela ukuba akukho mmi kufuneka akhiphe ipropati yakhe, amalungelo okanye inkululeko ngaphandle kokuba "ngokomthetho ilizwe, "njengoko lisetyenziswe yinkundla. Ibinzana elichanekileyo "inkqubo efanele yomthetho" yabonakala kuqala njengengxenye kaMagna Carta "umthetho womhlaba" ngokomthetho we-1354 wamkelwa phantsi kweNkosi u-King III owabuyisela isiqinisekiso seMagna Carta senkululeko.
Ibinzana elichanekileyo ukusuka kwi-1354 yokuguqulelwa komthetho weMagna Carta ebhekiselele "kwinkqubo yomthetho" efundwayo:
"Akukho mntu uhlala kummandla okanye kwiimeko zakhe, akayi kuthatyathwa okanye angatyiki, akabulali, ngaphandle kokuba uphendule ngokulandelelana komthetho ." (Ugxininisa wongezwa)
Ngelo xesha, "kuthathwa" litsholwa lithetha ukubanjwa okanye ukunyanzelwa inkululeko ngu rhu lumente.
'Inkqubo yoMthetho' kunye 'noKhuselo olulinganayo lwemithetho'
Ngoxa iSilungiso seshumi elinesine senza isicelo seMithetho yeBhili yamaLungelo okuTshintshiselwa kwesiGqibo soMgaqo-nkqubo weNkqubo yeMithetho kaMgaqo-nkqubo weSizwe. kodwa ngaba iSihlomelo sesine elinesibini "IsiGaba soKhuselo esifanayo" sisebenza nakwi-federal government nakuzo zonke izakhamuzi zase-US, kungakhathaliseki ukuba zihlala phi?
IsiGatya soKhuselo esifanayo sijoliswe ekunyanzeliseni ukulingana kokulingana koMthetho wamaLungelo oLuntu ka-1866, owanikezela ukuba bonke abemi baseUnited States (ngaphandle kwamaNdiya aseMerika) banikezwe "inzuzo epheleleyo kunye neyokulingana nayo yonke imithetho kunye neenkqubo zokukhuseleko komntu kunye propati. "
Ngoko, isigatya soKhuseleko esifanayo sisebenza kuphela kubarhulumente baseburhulumenteni kunye noorhulumente basekhaya. Kodwa, faka iNkundla ePhakamileyo yase-United States kunye nokuchazwa kwayo kwiNkcazo yokuCwangcisa iNkqubo.
Kwisigqibo sawo ngo-1954 kwimeko yeBolling v. Sharpe , iNkundla ePhakamileyo yase-United States yanquma ukuba iSigqibo sesigqibo sesigqibo sesigqibo sokuQinisekisa esifanayo sisebenza kwi-federal government ngokusebenzisa iSihlomelo sesiGqibo sokuSungulwa komThetho.
Inkundla yeBolling v. Isigqibo sikaSharpe sibonisa enye yeendlela "ezi-5" eziye zachitshiyelwa nguMgaqo-siseko kule minyaka.
Njengomthombo wempikiswano eninzi, ingakumbi ngexesha leentsuku zokudibanisa isikolo, iSigqeba soKhuselo esifanayo sakhuphule kwi-tenet yezomthetho ebanzi "yoBulungisa obulinganayo phantsi koMthetho."
Igama elithi "Ubulungisa Bokulingana phantsi koMthetho" kungekudala liza kuba sisiseko seSigqeba soPhakamileyo seNkundla ePhakamileyo kwi-1954 yeBrown v. IBhodi yeMfundo , eyakhokelela ekupheleni kocalulo ngokobuhlanga kwizikolo zikawonkewonke, kunye nemithetho eminqabelayo ukucwaswa ngabantu abahlukeneyo ngokucacileyo ngokucacileyo amaqela avikelwe.
Amalungelo aKhulu kunye nokuKhuselwa okunikezelwa nguMgaqo woMthetho
Amalungelo ayisiseko kunye nokukhusela okuvela kwiNkqubo yoKwenziwa kweNkundla yomthetho isebenza kuzo zonke iinkqubo zedolophu kunye neseburhulumenteni ezinokubangela ukuba "ukunyanzelwa" komntu, kubhekiselele ekulahlekeni "kobomi, inkululeko" okanye ipropati.
Amalungelo enkqubo efunekayo ayasebenza kuwo onke amatyala karhulumente kunye nolwasemthethweni kunye nolwasemthethweni oluvela kwiindlebe kunye nokufaka izityholo kwiimvavanyo ezivuthayo. La malungelo afaka:
Unelungelo lokulinga elingenakulungelelaniswa nokukhawuleza
Ilungelo lokubonelelwa ngezaziso zecala lolwaphulo-mthetho okanye usebenzo lwabantu abandakanyekayo kunye nezizathu zomthetho zezo ntlawulo okanye izenzo
Izizathu ezifanelekileyo zokuba kutheni isenzo esicetywayo akufanele sithathwe
Unelungelo lokunikela ubungqina, kuquka ilungelo lokubiza amangqina
Unelungelo lokukwazi ubungqina obuphikisayo (ukuchazwa)
Ilungelo lokuphambuka iingqina ezimbi
Ilungelo kwisigqibo esisekelwe kuphela kubungqina kunye nobungqina obuchazwe
Ilungelo lokumelwa ngummeli
Imfuno yokuba inkundla okanye enye inkundla ilungiselela irekhodi ebhaliweyo yobungqina kunye nobungqina obuchazwe
Imfuno yokuba inkundla okanye enye inkundla ilungiselele iziphumo ezibhaliweyo zezinto kunye nezizathu zesigqibo sayo
Amalungelo aPhambili kunye neNkcazo yeNkqubo yokuCwangcisa iNkqubo
Nangona izigqibo zenkundla zifana neBrown v. IBhodi yeMfundo sele iqulunqe iSigqibo soNgeniso lweNkqubo njengoluhlobo lommeli olwahlukileyo lwamalungelo anxulumene nokulingana kwezentlalo, lawo malungelo ayebhekiswe ubuncinane kuMgaqo-siseko. Kodwa kuthiwa ngamalungelo angakhankanyiwe kuMgaqo-siseko, njengelungelo lokutshata nomntu ozikhethelayo okanye ilungelo lokuba nabantwana kwaye ubaphakamise njengoko ukhetha?
Enyanisweni, iingxabano eziphambili zomgaqo-siseko malunga nekhulu lokugqibela leminyaka ziye zabandakanyeka amanye amalungelo "okuzimela ngasese" njengomtshato, ukhetho lwezesondo kunye namalungelo okuzala.
Ukulungelelanisa ukumiselwa komthetho we-federal kunye nombuso ojongene nemiba enjalo, inkundla iguqule imfundiso "yenkqubo yokubambisana yomthetho."
Njengokuba kusetyenziswa namhlanje, inkqubo ebalulekileyo yokubambisa ithi i-Fifth ne-Fourteen Amendments ifuna ukuba yonke imithetho yokunqanda "amalungelo athile" kufuneka abe nefanelekileyo kwaye anengqiqo kwaye ukuba umbandela umbuzo kufuneka ube ngumxhala osemthethweni karhulumente. Kule minyaka, iNkundla ePhakamileyo isetyenzisile inkqubo ebalulekileyo yokugxininisa ukukhuselwa kwe-Fourth, yesihlanu kunye noTshintsho lwesithandathu kuMgaqo-siseko kwiimeko ezijongene namalungelo asemqoka ngokumanyanisa amanyathelo athile athathwe ngamapolisa, ama-legislature, abashushisi kunye nabagwebi.
"Amalungelo angundoqo" achazwa njengabo banxulumano olunegunya lokuzimela okanye lobumfihlo. Amalungelo asemqoka, nokuba ngaba ayalelwa kuMgaqo-siseko okanye ayikho, ngamanye amaxesha abizwa ngokuba "inzala." Ezinye zeempawu zala manqaku afunyanwa yizinkundla kodwa ezingabalwanga kuMgaqo-siseko zibandakanya, kodwa azithethi:
Ilungelo lokutshata nokuzala
Unelungelo lokugcina abantwana kunye nokuphakamisa ngoko, njengokuba umntu ubona kufanelekile
Unelungelo lokwenza ulwaphulo-mthetho
Unelungelo lokuchonga njengobesini ngesini
Umsebenzi olungileyo emsebenzini wokhetho
Unelungelo lokunqaba unyango
Inyaniso yokuba umgaqo othile unokuthintelwa okanye ubenqabela ukusetyenziswa kwelungelo eliyisiseko akukho kuzo zonke iimeko kuthetha ukuba umthetho awuhambisani nomgaqo-siseko phantsi kweNkqubo yokuCwangcisa iNkqubo.
Ngaphandle kokuba inkundla ithathe isigqibo sokuba ayimfuneko okanye ayifanelekanga ukuba urhulumente anqande ilungelo ukwenzela ukufezekisa injongo ethile karhulumente ekuvunyelwene ngayo ukuma.
Imbali yoMyalelo kaMongameli uTuruman Wokuthembeka ka-1947
Umgubo waseFranchthi oLwandle lwaseMeditera
Yintoni 'i-Mulligan' eGoli?
Ukuthatha inxaxheba kwabasetyhini kuBomi boLuntu kwii-1800 zakudala
Yintoni iCultural Carrying Capacity?